7 Sababood oo Loo Nadiifiyo Liiska Emailkaaga iyo Sida Looga Saaro Macaamiisha » Martech Zone
Waxaan diiradda saareynaa suuqgeynta emaylka dhawaanahan sababtoo ah waxaan runtii ku aragnaa dhibaatooyin badan oo ka jira warshadan. Haddii hawl-wadeenku sii wado inuu kugu cadaadiyo koritaanka liiska emailkaaga, waxaad runtii u baahan tahay inaad ku tilmaamto qodobkan. Xaqiiqdu waxay tahay, ka weyn iyo ka weyn liiska emailkaaga, waxyeelada ugu badan ee ay u yeelan karto emaylkaaga wax ku oolka suuqgeynta. Waa inaad, halkii, diiradda saartaa imisa macaamiil firfircoon ayaad ku leedahay liiskaaga - kuwa gujinaya ama beddelaya.
Sababaha loo nadiifiyo Liiska Emailkaaga
Aqoonsiga - ISPs waxay xayiraan ama dhigaan emaylkaaga galka qashinka oo ku saleysan sumcadda diritaanka IP ee liita. Haddii aad had iyo jeer u dirto cinwaanno emayl xun, waxay saameyn ku yeelan doontaa sumcaddaada.
Liis garaynta - Haddii sumcaddaadu liidato, dhammaan emaylkaaga waa la xiri karaa.
Dakhliga - Haddii in badan oo emaylladaadu ka mid yihiin ay sanduuqa ku galaan sanduuqa macaamiisha firfircoon, taasi waxay abuuri doontaa dakhli badan.
Qiimaha - Haddii kalabar dhammaan iimaylkaaga ay tagayaan cinwaannada emaylka ee dhimanaya, waxaad laba jeer bixineysaa sida ay tahay inaad ula joogto iibiye emailkaaga. Nadiifinta liisaskaaga ayaa yareyn doonta kharashkaaga ESP.
Bartilmaameedsiga - Adoo aqoonsanaya macaamiishaada aan firfircooneyn, waxaad toos ugu diri kartaa dalabyo kaqeybgal ah iyaga, waxaad ku bar tilmaameedsan kartaa baraha bulshada, oo fiiri haddii aad kaheli karto inay dib u howlgalaan.
Relationships - Markaad haysato liis nadiif ah, waxaad ogtahay inaad ku mashquulsan tahay macaamiisha daneeya sidaas darteed waxaad si fiican diiradda u saari kartaa farriintaada.
Warbixinta - Adigoon ka walwalaynin tirada liistada oo aad diirada saareyso ka qeyb qaadashada, waxaad ka heli kartaa xog aad u saxan oo ku saabsan sida ugu wanaagsan ee barnaamijyadaada barbaarinta iyo emaylka u shaqeynayaan.
Waxaan kugula talineynaa la-hawlgalayaashayada 'Neverbounce for your' adeegga xaqiijinta emaylka! Nidaamyadooda algorithms ee lahaanshaha iyo xaqiijinta dhinac saddexaad waxay wax weyn ka beddeleen soo gudbinta macaamiisheenna. Marna ha noqon waxay bixisaa dalab ah 97% dammaanad sax ah. (Hadday in ka badan 3% e-maylladaada saxda ah ay soo boodaan ka dib markay adeegsadaan adeeggayaga, way soo celin doonaan farqiga.)
Astaamaha waligaa ha ku darin:
12-Geedi socodka Hubinta - Isticmaalka MX, DNS, SMTP, BULSHADA, iyo teknoolojiyada dheeriga ah ee lagu ogaanayo ansaxnimada cinwaanada, hannaankeenna xaqiijinta ee 12-tallaabo ah ayaa hubinaya emayl kasta illaa 75 jeer oo kala duwan - meelo kala duwan oo adduunka ah.
Qalabka Falanqaynta Bilaashka ah Tijaabi xogtaada qiime la'aan. Dib ayaan ka soo sheegi doonaa haddii ay nabad tahay in la diro ama ay u baahan tahay in lagu nadiifiyo iyadoo lagu qiyaasayo heerka soo kabashada. Macaamiil ahaan neverBounce, waxaad leedahay adeegsi aan xadidnayn oo muuqaalkan ah. Intaa waxaa sii dheer, waxaad ku dhisi kartaa falanqeyntooda bilaashka ah nidaamkaaga adoo adeegsanaya API-gaaga oo aan qiimo lahayn.
Xoqo Liis Bilaash ah - NeverBounce waxay bixisaa dib-u-soo-saarid bilaash ah iyo ka saarid qaab-dhismeed xun ka hor intaanay ku helin wadarta kharashka shaqadaada. Marnaba lacag kama qaadanayno xoqidda.
Marnaba Ma Isticmaalaan Xogta Taariikhda - E-maylku si isdaba joog ah ayey isu beddelaan, in kasta oo inta badan shirkadaha xaqiijintu ay kaydiyaan kharashaadka iyagoo soo bandhigaya natiijooyin taariikhi ah, waxaan hubinnaa emaylladaada mar kasta iyo goor kasta, iyadoo la hubinayo jawaabta ugu dambeysa uguna saxsan. Waqtiga ugu dhaqsiyaha badan ee ganacsiga, uma baahnid inaad sugtid waqti dheer inaad nadiifiso oo aad hubiso liiskaaga.
Falanqee Liiska Emailkaaga Bilaash Hada!
Infograafigani ka yimid Email Suubban sidoo kale waxay bixisaa liiska talaabooyinka la qaadayo si loo nadiifiyo macaamiisha isla markaana si sax ah loo nadiifiyo liiska emaylkaaga.
Tags: macaamiisha firfircoondib-u-soo-kabashonadiifi liiska emaylkasamatabbixinemail nadiif ahnadiifinta emaylkakharashka emaylkasumcadda emailkadakhliga emailkaqaybinta emaylkaadeeg bixiyaha adeegga emaylkamacaamiisha emailkaxaqiijinta emaylkagaar ahaankharashka espmacaamiisha aan firfircooneynnadiifi macaamiishadib u hawlgelinta
Ka kulul Kulul: Soo Bandhigida Cunto Cusub oo Suugaan Sir ah loogu talagalay Suuqgeynta LinkedIn